Gwọ nke Ule Anwale | Martech Zone
Monetate ewepụtala ihe omuma ihe omuma banyere ihe ị ga-eche na otu esi eme ka ego nke ngwa nyocha nke ulo oru weputa. Ọ bụ nlele zuru ezu banyere nsogbu, ụgwọ, mmetụta, ụgwọ efu, ụgwọ na-enweghị isi na ohere nke nnwale weebụsaịtị nwere ike ịnye.
Atụmatụ ego nke dị nso na narị afọ gara aga nke akpọrọ Total Cost of Ownership (TC) nwere ike inyere aka chọpụta ọnụahịa efu na nke na-enweghị isi nke nzụta. Gartner nakweere iji nyere aka tụọ ọnụahịa nke ngwanrọ ma ọ bụ ngwaike nke itinye ego na oge, ụlọ ọrụ kwesịrị ịtụle TCO mgbe ha na-ekpebi ngwa ọrụ nyocha weebụsaịtị iji.
Enwere m ekele maka isi okwu a: Ngwá ọrụ nwere ike ịdị ọnụ ala, ma ọ bụ bụrụ n'efu, mana oge gị na ndị mmadụ abụghị. Anyị na-ahụ ọtụtụ ndị na-agaghị etinye ego na ngwaọrụ… ma ọ dịghị mgbe leverage ndị nweere onwe ha na ha ga-enwe mmetụta.
Tags: ego nke ule weebụmonetatelaghachi azụmaahịaROItestingngụkọta ọnụ ahịa ha nwereule weebụ
Apr 4, 2012 na 2: 12 PM
Douglas, dị ka mgbe niile… ekele maka ikenye! Nọrọ na-ege ntị maka ihe esote infographic anyị na Ahụmịhe Ndị Ahịa. Kwesịrị ịbụ ezigbo otu!